Ahoana no Hialako Amin'ity Spam Online? Valinteny avy amin'ny Expert Expert
Raha manana ny ID mailaka ianao, dia mety hahazo hafatra manokana avy amin'ny famoahana antserasera na superstores amin'ny famindrana Cialis na Viagra. Na inona na inona maha-lahy na maha-vavy anao, ireo mpitsoa-ponenana dia hanohy hampita hafatra hafahafa ho anao ary manantena ny hisintona amin'ny mpanjifa maro isanandro. Ny mailaka dia fomba mora entina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, noho izany dia mandray tombony ireo orinasa na dia mivarotra zavatra vitsivitsy fotsiny aza - appraisals phoenix. Ny FDA (Food & Drug Administration) dia nampitandrina fa ny olona izay mividy zavatra an-tserasera dia mety ho voan'ny Levitra Cialis na Viagra mety mety hampidi-doza na tsy misy ilàna azy.
Tsy azo atao ny manakana ireo spam. Na izany aza dia azonao atao ny manakana ny hafatr'izy ireo amin'ireo dingana tsotra nataon'I Alexander Peresunko, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt .
Dingana # 1: Mamorona ny ID mailaka vaovao:
Tsara ny famoronana mari-pamantarana vaovao. Ny Komity Federaly federaly dia nanoro hevitra fa tokony hifidy anarana tsy mahazatra sy anarana isika mba tsy hahatonga ireo mpitsikilo sy ireo famoahana amin'ny aterineto tsy afaka mandefa hafatra hafahafa. Matetika izy ireo dia mandefa mailaka maro any amin'ny lisitry ny usernames mahazatra, ary ny mpampiasa anao sy ny tenimiafina dia tokony ho matanjaka mba tsy hisy hahafantatra azy ireo.
Dingana # 2: Mampahafantatra ny fifandraisana ara-dalàna rehetra:
Raha vao namorona adiresy imailaka hafa ianao dia tokony hampandrenesinao ny fifandraisana azo antoka momba ny ID anao. Mangataha azy ireo tsy hiteny na amin'iza na amin'iza momba ny ID mailanao vaovao fa tsy mandefa ny mailaka an-tsoratra..Ambonin'izany, tokony tsy hizara ny ID anao izy ireo amin'ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana, tambajotra sosialy sosialy na antoko tsy fantatra. Ny sigara rehetra ao amin'ny aterineto dia mamorona lisitra mailaka maro avy amin'ny angon-drakitra napetraky ny olona izay mino fa manohana anao amin'ny filazana anao ny tolotra manokana sy ny fifanarahana.
Dingana # 3: Fanovana ny fanalahidin'ny adiresy mailaka:
Tokony hametraka ny kaonty mailaka ianao mba hamafa ny mailaka misy ny spam version ny teny "Cialis" sy "Viagra." Azo atao izany amin'ny famoronana fitsipika izay manamarina ny mailaka rehetra sy ny hafatra manokana. Ireo tranonkala sy mpitsoka amin'ny aterineto dia mampiasa fitenenana diso ao amin'ny hafatra tahaka ny "Vi @ gra" sy ny "Cia !! s" hanesorana ireo sivana spam. Raha mahazo mailaka amin'ny teny toy izao ianao ao amin'ny ID vaovao, tokony hampidirinao any amin'ny fitsipika izy ireo, ka voavaha avy hatrany ireo hafatra. Raha maharay mailaka amin'ny mailaka miaraka amin'ny teny toy izany ianao ao amin'ny ID vaovao, tokony hampidirinao amin'ny fitsipika izay manafoana azy ireo haingana.
Dingana # 4: Fividianana vokatra avy amin'ny vohikala sy orinasa mendrika:
Tokony hividy zavatra avy amin'ny orinasa mendrika sy vohikala legioma foana ianao. Ny olona rehetra dia hamorona haingana ireo tranonkala fandraharahana ara-dalàna. Ny sasany amin'izy ireo dia mandefitra amin'ny fanangonana ny adiresy mailakao, ny antsipiriany momba ny carte de crédit ary ny fampahalalana manokana, raha ny hafa kosa te-hamoaka vola amin'ny fividiananao. Ireo semaitra sy spammers an-tserasera dia hikorontana anao raha ampidirinao ny tsipiriany sy ny antsipiriany manokana momba ireo tranonkala mpangalatra. Noho izany, tokony hifanaraka amin'ireo orinasa an-tserasera sy malaza toy ny eBay.com, Alibaba.com, Amazon.com, Walmart, ary Target.
Torohevitra sy fampitandremana:
Tsy tokony hikirakirana ny bokotra "fanonona" amin'ny spam izay mampiditra Cialis na Viagra. Ny hafatra dia hilaza fa ny fanokafana ireo rohy dia hanaisotra ny fandefasana ny mailaka avy amin'ny lisitry ny mailaka, saingy miezaka izy ireo hanamafy fa ny adiresy mailaka dia mavitrika sy marina. Araka ny filazan'i McAfee, ireo hafatra dia handrara ny hafatrao, ary ireo tetikasa amin'ny aterineto dia hampirisika anao hividy ny vokatrao.